Nye onyinye ahaziri iche | ECommerce ozi ọma
Nye ngwaahịa ahaziri iche
Kemgbe mmalite nke ịre ahịa ịntanetị anyị ahụwo a nnukwu uru, a fọrọ unexplored ahịa ruru na-agaghị emeli nke nwere a mkpọsa ụlọ ahịa, na ihe ẹdude anụ ahụ yiri nkata na njikere maka ire ere. Na online echekwa ụlọ nkwakọba ihe fọrọ nke nta ka anyị nwee ma enwere ike gbanwee ya tupu ị rute njedebe onye ahịa, yabụ anyị nwere ike ịgbanwe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ, ma ọ bụ ọbụna mepụta ya site na ncha nke nkasi obi nke onye ahịa anyị. Nrịgo nke ọtụtụ ụdị abụwo ihe a. Nhazi onwe bu otu n’ime ụkpụrụ agbakwunyere nke ọgbọ ọhụrụ na-enyekwu uru.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwa ịbanye na ahịa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahaziri iche, mbụ anyị ga-enyocha nke ọma ihe anyị na-ere:
Ọ bụ nke a na-emepụta ya ka ọ bụ ànyị na-eche iwu ka anyị mee ya?
Ihe akụrụngwa ọ bụ mgbe niile ka ọ dị iche na oge ọ bụla?
Kedu ihe ga-abụ mmetụta akụ na ụba nke itinye nhazi onwe gị?
Ego ole ka anyị nwere ike ịgba ụgwọ maka ngwaahịa omenala?
Ozugbo anyị zara ajụjụ ndị a, anyị nwere ike kọwaa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịnye ndị ahịa anyị nhọrọ hazie nzụta gị. Ka anyị cheta na, agbanyeghị na enwere ụlọ ọrụ na-eme ka usoro azụmaahịa ha niile na nkeonwe, enwere ndị ọzọ nke akụkụ a bụ ntakịrị ntakịrị, nke nwere ike iwepụtakwu ahịa ma ọ bụ gbaa ndị ahịa ume ka ha mee.
Site na nke mbụ anyị nwere ike iwere dịka ọmụmaatụ Etsy, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dị ka Ebay, na ihe dị iche na nke a na-ere ngwaahịa nke ahaziri iche ma ọ bụ nke ejiri aka mee. N'aka nke ọzọ, Apple nyere ndị ahịa zụtara elektrọnik ha n'ịntanetị ikike idekọ obere ahịrịokwu na ha n'efu. Nke a bụ iji gbaa ịzụrụ ihe n'ịntanetị ume ma zere ndị nnọchi anya ya. Ihe ọ sọrọ gị mee, nyochaa uru dị na ịbanye na nkeonwe, ị ga-ahụ na ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Nye ngwaahịa ahaziri iche
Enwere ike ijikwa ụlọ ahịa naanị site na ekwentị anyị?
Olee otú obibi aghụghọ?